AirAsia - Taable Note
AirAsia - 13d98d
Su Wai Go - AirAsia 2018-11-15 10:15
Su Wai Go: #AirAsiaBIGSALE ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲ မေးနေသူများအတွက် ... Su Wai Go page ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် မသိမ့်ကနေ ၀ယ်ယူပြပေးထားတယ်နော်။ ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။
AirAsia Photo 2018-11-14 11:30
🇲🇲️🇲🇲️🇲🇲️ မြန်မာအသင်းကို ကွင်းထဲအရောက်သွားအားပေးကြရအောင်လား ဘောဝါသနာရှင်တို့ရေ။ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် AFF Suzuki Cup 2018 မြန်မာ - ဗီယက်နမ်ပွဲစဉ် ကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေ မဲဖောက်ပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကို လက်မှတ် ၃ စောင်တောင် ဖောက်ပေးမှာဆ...
Travel by Naw Htike - AirAsia 2018-11-14 08:54
Travel by Naw Htike: #AirAsiaBIGSALE ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတာ သိချင်နေကြပြီလားရှင့်။ မနော်ထိုက် (Travel by Naw Htike) ကနေ ဘယ်လို ၀ယ်ယူရမလဲဆိုတာကို ပြသပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့အထိပဲ ၀ယ်လို့ရမှာဆိုတော့ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး အမြန်ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်။
AirAsia Photo 2018-11-14 04:30
#AirAsiaBIGSALE ကို ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အဲအေးရှား Mobile App မရှိသေးရင်တော့ ဒီလင့်မှာ @ http://bit.ly/AirAsiaAPP ဒေါင်းလုဒ်ရယူလိုက်ပါ။
ကြိုတင်ဝယ်ယူရမည့်ကာလ - ယနေ့မှစ၍ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့အထိ
ခရီးသွားရမည့်ကာလ - ၂၀၁၉ မေ ၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ...
AirAsia Photo 2018-11-13 09:00
အဲအေးရှားကနေ (RED) အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပါပြီ။
ယနေ့မှစ၍ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့အထိ အဲအေးရှားဝက်ဆိုဒ်မှာ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတိုင်း AIDS တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ (RED) အဖွဲ့အစည်းသို့ 0.20 USD ကိုပေးလှူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
FLY (RED) SAVE ...
AirAsia Photo 2018-11-11 16:00
၂၀၁၈ ခုနှစ်ကလဲကုန်တော့မှာနော်။ အိပ်မက်ခရီးစဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရင်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုချရမယ့်အချိန်အခါပါပဲ။ #AirAsiaBIGSALE ကို ဒီလင့်ကနေ@ http://bit.ly/AirAsiaBIGSALE_MM ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
ခရီးသွားရမည့်ကာလ - ၂၀၁၉ ...
AirAsia Photo 2018-11-10 16:00
BIG Member အနေနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေရယူရမယ့်အချိန်အခါပါပဲ။ #AirAsiaBIGSALE ကို တစ်ခြားသူတွေထပ် ၂၄ နာရီကြိုတင်ဝယ်ယူခွင့်ကို ရယူလိုက်ပါ။ BIG Member အကောင့်ကိုဝင်ပြီး ၀ယ်ယူဖို့မမေ့နဲ့နော်။
ခရီးသွားရမည့်ကာလ - ၂၀၁၉ မေ ၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့အထိ
အဲအေးရှား Mobile App ကနေ သို့မဟ...
#AirAsiaBIGSALE - AirAsia 2018-11-09 11:30
#AirAsiaBIGSALE: လက်ဆောင်ဘူးထဲမှာရှိနေတာကတော့ အဲအေးရှားရဲ့ BIG SALE ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁ ရက် ၁၁ လ ကစပြီး BIG Member တွေအနေနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွားရမည့်ကာလ - ၂၀၁၉ မေ ၆ ရက်မှ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့အထိ
မိမိတို့ရဲ့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း အသိပေးလိုက်ပါဦးနော်။ အဲအေးရှား BIG Mem...
AirAsia Photo 2018-11-06 09:00
🇲🇲️🇲🇲️🇲🇲️ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာဟေ့ 🇲🇲️🇲🇲️🇲🇲️
မန္တလေးရွှေမြို့တော်က ဘောဝါသနာရှင်တို့ရေ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် AFF Suzuki Cup 2018 မြန်မာ - ကမ္ဘောဒီးယားပွဲစဉ် ကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေ မဲဖောက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့်။
တစ်ယောက်ကို လက်မှတ် ၄ ...
AirAsia Photo 2018-11-06 04:30
အဲအေးရှားကတော့ AFF Suzuki Cup 2018 ကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
We’ve prepared something big and exciting! Listen up! We’reaproud partner of the upcoming AFF Suzuki Cup 2018!
AirAsia Photo 2018-11-05 04:30
ပိတ်ရက်တွေဆက်တိုက်နဲ့ ခရီးထွက်ဖို့အကောင်းဆုံး အချိန်အခါပါပဲရှင့်။
ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် - USD 37 မှစ၍
မန္တလေး - ဘန်ကောက် - USD 37 မှစ၍
ရန်ကုန် - ချင်းမိုင် - USD 37 မှစ၍
ရန်ကုန် - ကွာလာလမ်ပူ - USD 50 မှစ၍
ကြိုတင်ဝယ်ယူရမည့်ကာလ - ယနေ့မှစ၍ ၂၀၁၈ ...
AirAsia Photo 2018-11-02 04:30
အဲအေးရှားရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ၂၀၁၉မှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ခရီးသွားအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါ။
AirAsia Mobile App မှာ ၇၂ နာရီသာရရှိမယ့်ပရိုမိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ AirAsia Mobile App မရှိသေးရင်တော့ @ http://bit.ly/AirAsiaAPP မှာ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Northern Illinois Huskies by Usports